Watercolor PNG - khayraadka naqshadaynta biyaha ee bilaashka ah ee biyaha
WAA INAAD LA'AAN
In ka badan 4 million isticmaalayaasha firfircoon ayaa qiimeeya suurtagalnimada #1 Slider Revolution Slugin hadda ayaa lagu heli karaa Baaskiilka. U samee boggagaaga gaarka ah iyo tifaftireenta muuqaalkeena iyo in ka badan Xigalada 140
Ka bax Canvas MENU
Makhaayadda dusha ka furan ayaa maanta caan u ah. Waxay noqdeen nidaam asaasi ah oo loogu talagalay moobilka si loo wanaajiyo khibradaha isticmaalaha
View 360 Fasalka
WAX SOO DHACAY?
Waxaad cabtaa Khamriga, waxaan qabanaa shaqada
Yehaaa, ha baxo
La soco ganacsigaaga koriinka sida mar hore
Sidan ayey u shaqeysaa
Si wax ku ool ah u isticmaalida adeega Cloud
dheeraad ah ii sheeg
Fikirka saxda ah ee dhibaatadaada
Haa, waan rabaa
95% Qiimaha Qancinta Macaamiisha
24 / 7 Taageerada Macaamiisha ee adiga kugu sugaya
WatercolorPNG waxay bixisaa ururinta ugu weyn ee sawirrada biyaha la heli karo si loo soo dejiyo.
Raadi shahaadooyinka xorta ah ee 8000-ka ee xayeysiinta ah iyada oo ah il isgaarsiinta alaabtaada ama muuqaalka alaabta.
Pink Peonies Flavor of Love Pc
Bouquet Bouquet leh asters iyo dhirbaaxada ubaxa PNG
Bouquet of riyooyin riyoodo barkiis png
Dabiiciga ubaxa cagaaran ee cagaaran
Bouquet leh xafaayad Dreams Comes True Watercolor png
Xabash iyo foorno Watercolor png
Urur-diirinta biyaha ee PNG
Ururinta quruxda badan "Super Style" Watercolor png
WatercolorPNG.com waa boodh weyn oo rinjiga biyaha ka dhalaalaya! Waa khayraadka internetka lagu kalsoon yahay ee sawirro gaar ah oo ay sameeyaan farshaxanada xirfadlayaasha ah ee Ukrain. In ka badan sanadada 15 ee shaqada ee abuurka ayaa abuuray in aan wax ka beddelno habka aan u helno uguna soo gudbino sawirada qaraarka-sare. Kooxaha farshaxanka iyo naqshadeyaalkeena, oo ay hogaaminayaan maamulayaasha, waxay u shaqeeyaan si gooni ah si ay u xoojiyaan ayna u dhejiyaan. Iyada oo ah dukaanka biyaha farshaxanka ah, waxaan kugula talineynaa feylo badanaa png leh asal muuqaal ah ama qaababka jpg. Waxa ugu fiican ee adeegkayagu waa inaad leedahay sawirro gaar ah, kuwaas oo ah royalty free. Si kale haddii loo dhigo, marka aad bixiso lacag go'an, waxaad heli doontaa xuquuqda ganacsiga oo buuxa si aad u isticmaasho rinjiga biyaha lagu diiriyo oo xitaa ujeeddo ganacsi.
Macaamiishayadu waa naqshadeeyayaasha iyo xirfadleeyaal madaxbannaan kuwaas oo helaya faa'iidooyin badan oo nala wadaagaya. Waxa ugu weyni waa:
sawir gaar ah ee qiimaha ugu hooseeya
casriga ah iyo tan farshaxanka biyaha kulul
jawaab degdeg ah oo hufan saacadaha 24 haddii gargaar loo baahan yahay
Waxaan horey u abuurnay wax ka badan 60,000 sawirada tayo sare leh ee iibka. Waayo-aragnimo dheer, xishood ah waxa aan sameyneyno iyo rabitaanka hagaajinta waxaa dareemaya macaamiisheena waxaanan ka dhignaa inay ku soo noqdaan WatercolorPNG.com wakhti iyo wixii ka dambeeya. Waxaan nahay koox dad ah oo yaqaanno sida habka hal-abuurka ah loo qabanayo si aad u hesho faa'iidada ugu sareysa. Waxaan aqbalnaa fikradaha casriga ah oo waxaan kula wadaagnaa sawirada png!
Qiimaha alaabta wax lagu sameeyey waa mid aad u sareeya. Kooxda WatercolorPNG.com waa mid ka mid ah kuwa fahansan dalabaadka casriga ah ee naqshadeeyayaasha waxayna ku qanacsan yihiin. Sidaa daraadeed, waxaanu siinnaa walxaha biyaha ee biyaha, kuwaas oo abuuri kara khayaali ah alaabta rinjiga leh. Adeeggayagu waa inaanu kuu soo bandhigo sawir gaar ah, taas oo muujinaysa aduunka guud ahaan flora iyo fauna. Inkasta oo mid kasta oo ka mid ah nooca suuliga ah uu ka kooban yahay si bilaash ah loogu isticmaalo sawirrada iyo xitaa loo qaabeeyay asalka lacagaha bilaashka ah, kooxdayada farshaxanadu waxay ku dadaalaan inay ku siiyaan tayada ugu fiican. Waxaan la soconaa fikradaha cusub waxaanan isku daynaa in aan hirgalino xirfadaheena. Tusaale ahaan, qaabka ubaxa waxay si fudud ugu qabsan doonaan dhalinyarada. Marka la eego asalka asalka ah ee feylalaha png, oo aan ku siinno clipcolor clipart kasta, wuxuu ku siinayaa fursad inaad abuurto qaabkaaga.
Waxaan kuu sheegi karnaa waxyaabo badan oo ku saabsan sawirada. Si kastaba ha noqotee, ma kuu sharxi doono haddii aan mudnaan u laheyn inaan la shaqeyno. Macaamiishayadu waxay noo sheegi lahaayeen annaga oo ah:
dukaanka internetka ee la isku hallayn karo ee suugaanta yaryar ee suugaanta yaryar
bixiyayaasha mas'uulka ah ee sawirro gacmeed lagu rinjiyeynayo oo karti u leh fannaaniinta Yukreeniyaan
maamulayaasha niyadda ah ee had iyo goor diyaar u ah inay xaliyaan dhibaatooyinka ama ka jawaabaan su'aalo dheeri ah
baadhayaasha casriga casriga ah
waalan ee dadka farshaxanka ah
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abuurto, wallpaper xayawaanka gudaha gudaha ama bogga, sawir gacmeedyada suunka lagu rinjiyeeyo waxay samayn doonaan naqshad aad u fiican macaamiisha 'indhaha. Waxyaabaha u muuqda inay yihiin kuwo dabiici ah oo run ah had iyo jeer waa mudnaan sare leh!